clamp clamp, mpamatsy fihenjanana mpamatsy sy orinasa - China clamp clamp, tensions clamp Manufacturer
PA1500 Plastika fihenjanana plastika Material Ny vatan'ny clamp dia vita amin'ny toetr'andro sy polymer mahatohitra uv miaraka amin'ny vovonan'ny polymer wedge. Tsoraka mampifandray azo ovaina vita amin'ny vy narendrika mafana (FA) na vy vy (SS). Loko mainty Halavany fohy <100 m, na miankina amin'ny rafitra tsipika
Vatam-panafody vita amin'ny toetr'andro sy fanoherana UV Polymer na vatana firaka aliminioma miaraka amina fotony polymer wedge.
Rohy azo ovaina vita amin'ny vy mandroboka mafana (FA) na vy vy (SS).
Ny wedges iray dia mitazona ny tariby mandeha ho azy ao anaty vatana misy kodiarana.
Ny fametrahana dia tsy mitaky fitaovana manokana ary mihena be ny fotoana fiasana.
◆ Firaka alimina matanjaka be, nylon miampy vera fibre, vy vy
◆ Vatam-panafody vita amin'ny toetr'andro sy fanoherana UV Polymer na vatana firaka aliminioma miaraka amina fotony polymer wedge.
◆ Rohy azo ovaina vita amin'ny vy mandroboka mafana (FA) na vy vy (SS).
◆ Izy ireo dia miavaka amin'ny fahamendrehana mekanika avo lenta, ny refy mihena ho an'ny fikirakirana mora kokoa, ny fanoherana mekanika sy ny toetr'andro avo. Fitaovana mitazona tariby amin'ny fitaovana fanamafisam-peo dia miantoka ny insulateur avo roa heny ho an'ny atiny tsy miandany ary ny fahasimban'ny torohevitra, ny faritra azo antoka, tsy ilaina ny fitaovana. Fandoavana vy tsy misy vy miaraka amina marbra roa voahidy amin'ny farany, ny fifamatoran'izy ireo dia ahafahana mihidy tsara kokoa amin'ny vatan'ny clamp.
◆ Fametrahana maimaimpoana fitaovana miaraka amin'ny wedges mihetsiketsika ao anaty vatana.
◆ Mora ny manokatra fahazoan-dàlana handefasana kaonono amin'ny fononteny sy pigtails Halavan'ny onitra azo ovaina amin'ny dingana telo.
Fametrahana maimaimpoana fitaovana miaraka amin'ny wedges mihetsiketsika ao anaty vatana.
Mora ny manokatra fahazoan-dàlana handefasana kaonon-doha manamboatra ny fononteny sy ny pigtails Azo halava azo atao onitra amin'ny dingana telo.
Mora ny manokatra fahazoan-dàlana handoa onitra amin'ny alàlan'ny fononteny sy pigtails.
Ny halavan'ny fandoavana onitra amin'ny dingana telo.